Ikhaya -Mali mboleko zemali eziHlawulelwayo eziTshintshayo
Cela ukubolekwa imali
Faka isicelo semali mboleko yomhla wokurhola
Ukufakwa kwemboleko-mali ukuya kuthi ga kwi-2500 yeedola
Ukubolekwa kweMali ka-5000
I-1 (888) 539-0502
Sitsalele umnxeba! 1 (888) 539 0502
Wamkelekile kwiZemali mboleko eziMncinci- e-USA
Iqhosha likaPayday Loan's Cofa kwiqhosha
Zonke iintlobo zamatyala zamkelekile
Cofa apha Faka isicelo sokuBoleka iMali
IFomu yokuBoleka iMali Cofa apha ngezantsi
Ukuya kwi- $ 2500
Cofa apha Faka isicelo sokubolekwa kwemalimboleko
Cofa Apha ukuze undwendwele iphepha lethu likaGoogle
Yintoni iTiny Cash Loans
Imali mboleko encinci ngumboneleli ekuvumela ukuba ufake isicelo sokunxibelelana nababolekisi abaninzi ngaxeshanye ngesicelo esinye esilula. Endaweni yokukuboleka imali ngokuthe ngqo, iiTiny Cash Loans zisebenzisa ulwazi lwakho ukukufumana imali-mboleko efanelekileyo kwinethiwekhi yabo ababolekisi bexesha elifutshane.
Zithini izibonelelo zemali mboleko encinci?
Ukusetyenziswa ngokukhawuleza nangokulula. Isicelo sithatha nje imizuzu yokugcwalisa, sifuna ulwazi olusisiseko.
Uninzi lwababolekisi ngesicelo esinye. Sukuba nexhala malunga nokuzalisa isicelo emva kwesicelo. Imali mboleko ezincinci inethiwekhi epheleleyo yabaabolekisi inokunxibelelanisa nawe.
Fumana imali yakho ngokukhawuleza. Ukuba wamkelwe kwimali mboleko yethutyana kwaye uyamnkela, ungafumana imali ebekiweyo kwiakhawunti yakho njengosuku olunye lweshishini.
Ukuya kuthi ga kwi-1,000 2,500 yeedola kwimali mboleko yomhla wokuBhatala, ukuya kuthi ga kwi-XNUMX XNUMX yeedola kwimali mboleko yokufaka. Awuhlawuliswa nto ukuba usebenzise iimali mboleko ezincinci ukufumana iimali mboleko zexesha elincinci.
Ulwazi malunga mboleko:
Ayingabo bonke ababolekisi abanokubonelela ngesixa semali mboleko ukuya kuthi ga kwi-2,500 XNUMX yeedola. Elona xabiso liphezulu onokuboleka kulo nawuphi na umbolekisi limiselwa ngumbolekisi ngokusekwe kwimigaqo-nkqubo yakhe, enokuthi yahluke, kwaye kwityala lakho. Ixesha lokufumana ukubolekwa kwemali mboleko liyahluka phakathi kwabaabolekisi, kwaye kwezinye iimeko ukufekswa kwezinto zokusetyenziswa kunye namanye amaxwebhu kunokufuneka. Ukungenisa ulwazi lwakho kwi-intanethi akuqinisekisi ukuba uyakuvunywa kwimali mboleko.
Wonke umntu obolekayo unemigaqo kunye neemeko zawo kunye nemigaqo-nkqubo yokuhlaziya, enokwahluka kulowo ubolekayo ngumbolekisi. Kuya kufuneka uphonononge imigaqo-mboleko yakho kunye nomgaqo-nkqubo wokuhlaziya ngaphambi kokutyikitya isivumelwano semali mboleko. Ukuhlawulwa kade kwemali mboleko kungakhokelela kwimirhumo eyongezelelweyo okanye imisebenzi yokuqokelela, okanye zombini.
Ngokusebenzisa le webhusayithi okanye iinkonzo, umela kwaye uqinisekisa ukuba uneminyaka eli-18 ubuncinci, ukuba ungumhlali wase-United States, kwaye awungommi weliphi ilizwe apho imali mboleko oyifaka kuyo ayikho semthethweni.
Unokuba nemibuzo malunga neMali-mboleko yakho yomhla wokurhola
Yintoni imali mboleko yakho kwaye ndinokuyisebenzisela ntoni?
Abantu bafumana iimali mboleko zobuqu ukuze bancedise ngokulungiswa kwamakhaya, iindleko ezingalindelekanga, ukuthenga iholide, amatyala kunye nokunye. Imalimboleko enjalo komnye wababolekisi bethu inokukunceda ufumane imali oyifunayo! Nje ukuba ugcwalise iphetshana lethu kwi-intanethi, ukuba kuvunyiwe, unokufumana imali ngokukhawuleza ngosuku losuku olulandelayo.
Ndingayifumana ngokukhawuleza kangakanani imali?
Ngelixa ukuvunywa kombolekisi kungakhawuleza, phakathi kwemizuzu, uya kufumana imali yakho kuphela ngokukhawuleza ngosuku olulandelayo lweshishini. Cinga ngenkqubo njengokufaka isheke kwiakhawunti yakho yebhanki, njengesiqhelo, kuya kufuneka ulinde usuku olunye loshishino ngaphambi kokuba isheke inikezele kwaye imali ikho ukuze uyisebenzise kwiakhawunti yakho.
Uyikhusela njani imfihlo yam kunye neenkcukacha zam?
Ekuhanjiseni idatha yakho yobuqu kwinethiwekhi yombolekisi siqinisekisa ngokhuseleko oluphezulu lolwazi lwakho lomntu. Usebenzisa i-encryption ye-SSL idatha yakho yobuqu ikrunyiwe kwindlela eya kumaseva ethu, kwaye ichwechwe nje ukuba ifike kwiMali mboleko yeTiny.
Ngaba ikhona imirhumo?
Imali mboleko Tiny ayihlawulisi abathengi nayiphi na intlawulo kwaye akukho ntlawulo yokungenisa ulwazi lwakho kwi-Intanethi. Ukuba siyakwazi ukunxibelelanisa nendlela yokubolekwa kwemali-mboleko umbolekisi, umbolekisi wakho uya kukubonelela ngerhafu kunye nenqanaba lenzala yakho ngaphambi kokuba wamkele imali mboleko. Imali mboleko encinci ayisibolekisi kwaye ayinakho ukuxela kwangaphambili malunga nomrhumo kunye nomdla wokukhethwa kwimali mboleko oyizisiweyo. Akunyanzelekanga ukuba wamkele imiqathango oyiswe kuwe ngumbolekisi.
Imali mboleko encinci ayisibolekisi kwaye ayiboneleli mboleko zobuqu kodwa ithumela abathengi kubabolekisi abanokuthi babonelele ngemali mboleko. Imali mboleko encinci yeTiny ayikwazi kukubonelela nge-APR ngqo (iipesenti yePesenti yoNyaka) oya kuhlawuliswa ukuba wamkelwe kwimali mboleko. Ii-APR ziyahluka ngokweenkcukacha ezibonelelwe nguwe kwisicelo sakho semali mboleko kunye nombolekisi wakho. Uya kunikwa i-APR, iimali-mboleko kunye namanye amagama ngumbolekisi wakho ukuba siyakwazi ukunxibelelanisa nombolekisi kwaye uphinde ubhekiswe kwisivumelwano sakho semali mboleko kwinkqubo yokucela imali mboleko. Imali mboleko encinci ayinakho ukulawula okanye ulwazi lweenkcukacha-mboleko phakathi kwakho nombolekisi wakho. Ukuba ubonelelwe ngesivumelwano semali mboleko, uya kuba nenketho yokujonga kwakhona imiqathango yemali mboleko ongayamkelayo okanye uyikhabe.
Imboleko-mali yakho mboleko mali ephakathi kunye nexabiso lenzala elibekiweyo elibuyiswa kwiintlawulo ezilinganayo zenyanga kwaye zihlala zikhawulelwe kwiinyanga ezingama-24. Ukubolekwa kwemali mboleko kunye nokufaneleka kuxhomekeke kwiprofayili yakho yetyala. Ababolekisi bethu banokukunceda ufumane imali efikelela kwi-2,500 XNUMX yeedola ngokuxhomekeka kumbolekisi, kwisimo sakho nakwimeko yakho yezemali.
Umnini kunye nomphathi we-itcashloans.com ayingobolekisi kwaye akabandakanyekanga ekwenzeni izigqibo zamatyala ezihambelana nokubolekisana okanye ukwenza imboleko mali. Endaweni yoko, iwebhusayithi yenzelwe kuphela inkonzo ehambelana, eyenza abasebenzisi banxibelelane nababolekisi kunye nomntu wesithathu. Iwebhusayithi ayibizi nayiphi na intlawulo ngenkonzo yayo, nokuba inyanzelise nawuphi na umsebenzisi ukuba aqale uqhakamshelwano naye nawuphi na umntu obabolekayo okanye umntu wesithathu okanye amkele nayiphi na imveliso mboleko okanye inkonzo enikezelwa ngababolekisi. Yonke idatha emalunga nemveliso mboleko yobuqu kunye nomzi mveliso ziboniswa kwiwebhusayithi ngenjongo yolwazi kuphela. i-tinycashloans.com ayivumisi nawuphi na umbolekisi othile, nokuba ayimeli okanye inoxanduva lwezenzo okanye ukungasebenzi kwababolekisi. i-tinycashloans.com ayiqokeleli, igcina okanye inokufikelela kulwazi malunga nemirhumo kunye neentlawulo ezinxulumene nababolekisi abanxibelelanayo kunye / okanye nayiphi na imveliso mboleko. Imali mboleko yobuqu kwi-Intanethi ayifumaneki kuwo onke amabakala. Ayingabo bonke ababolekisi kwinethiwekhi abanokuthi babonelele ngemali mboleko ukuya kuthi ga kwi-3,000, XNUMX yeedola. i-vidogocashloans.com ayinakuqinisekisa ukuba umsebenzisi wewebhusayithi uza kukhethwa kuye nawuphi na umbolekisi okanye ngayo nayiphi na imveliso mboleko, iya kuthelekiswa nombolekisi, okanye ukuba iyahambelana, uyakufumana isibonelelo semali-mboleko yobuqu ngokwemigaqo ecelwe kwifom online. Ababolekisi kungafuneka benze itsheki yokuthenga ngetyala ngakwicala elinye okanye nangaphezulu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumaziko amakhulu etyala ukuze kuqinisekiswe ukuthembakala kwekhredithi kunye nomgangatho weemveliso zentengo zemboleko onokunikezela ngazo. Ababolekisi kwinethiwekhi banokufuna ukwenza uqinisekiso olongezelelekileyo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwinombolo yokhuseleko loluntu, inombolo yelayisensi yokuqhuba, incwadi yesazisi okanye amanye amaxwebhu okuchonga. Imigaqo kunye nobungakanani bemveliso mboleko ziyahlukahluka kubabolekisi kuya kubabolekisi kwaye zinokuxhomekeka kwizinto ezininzi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimeko yokuhlala kunye nokuma kwetyala komenzi-sicelo, kunye nemigaqo emiselwe ngumbolekisi ngamnye.
I-APR (iipesenti yePesenti yoNyaka) lixabiso lokubolekwa elibalwa kwikota yonyaka. Kuba i-vidogocashloans.com ayilobabolekisi kwaye ayinalo ulwazi ngokubhekisele kwimigaqo kunye nezinye iinkcukacha zemveliso mboleko yobuqu enikezelwa ngababolekisi ngokukodwa, i-vidogocashloans.com ayinakubonelela nge-APR echanekileyo ebizwayo kuyo nayiphi na imveliso yemali mboleko enikezelwa ngababolekisi. Ii-APRs zahluke kakhulu kumbolekisi-mbolekisi, ilizwe ngurhulumente kwaye zixhomekeka kwizinto ezininzi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwisimo sekhredithi somenzi-sicelo. Iintlawulo ezongeziweyo ezinxulumene nokunikezelwa kwemali mboleko, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimali yokuqalwa, ukuhlawula kade, iindleko zokungahlawulwa kunye nezohlwayo, kunye nezenzo ezingezizozezimali, ezinjengokuxelwa kwexesha lokuhlawula kunye nezenzo zokuqokelela ityala, zinokusetyenziswa ngababolekisi. . Ezi zenzo zezemali nezingezizo ezemali azinanto yakwenza ne-vidogocashloans.com, kwaye i-vidogocashloans.com ayinalo ulwazi lokufumana kwakhona naziphi na isenzo ezinokuthi zithathwe ngabaabolekisi. Zonke iindleko zetyala nezemali ezingezizozezimali ziya kuchazwa nakweyiphi na isivumelwano semali mboleko ngendlela ecacileyo necacileyo. I-APR ibalwa njengemali yonyaka kwaye ayisiyo imali yemali kwimali mboleko yakho.
Iziphumo zokuBhatala emva kwexesha
Kunconyelwe kakhulu ukuqhagamshelana nombolekisi ukuba ukuhlawulwa kade kulindeleke okanye kucingelwa ukuba kunokwenzeka. Kule meko, iifizi zokuhlawula kade kunye neentlawulo zinokuchazwa. Imithetho yaseburhulumenteni kunye neyeburhulumenteni imiselwe kwiimeko zokuhlawula kade kwaye zinokwahluka kwimeko nganye. Zonke iinkcukacha eziphathelele kwiinkqubo kunye neendleko ezinxulumene nokuhlawulwa kade zichazwe kwisivumelwano semali mboleko kwaye kufuneka ziphononongwe ngaphambi kokusayina naluphi uxwebhu oluhambelana nalo.
Isohlwayo sezezimali kunye nezangezizozezimali zinokuchaphazeleka kwiimeko zokungahlawulwa okanye zokuphosa intlawulo. Imirhumo kunye nezinye iintlawulo zezezimali zokuhlawulwa kade ziya kuchazwa kwisivumelwano semali mboleko. Izenzo ezongeziweyo ezinxulumene nokungahlawulwa, ezinjengemvuselelo, zinokuchazwa kwimvume enikezelweyo. Imigaqo yokuvuselelwa kufuneka ichazwe kwisivumelwano ngasinye semali mboleko. Iindleko ezongezelelweyo kunye nemirhumo ehambelana nokuhlaziywa inokusetyenziswa.
Inkqubo yokuqokelelwa kwamatyala kunye nezinye iinkqubo ezinxulumene nazo zinokwenziwa. Zonke iintshukumo ezinxulumene nezi zinto zihlengahlengiswa kuMthetho weNkqubo yokuQokelelwa kwamatyala eDweliswe kunye neminye imithetho esebenzayo kunye nekaRhulumente ukuze kukhuselwe abathengi ekubolekeni okungalunganga kunye namava amabi wokuboleka. Uninzi lwababolekisi ababhekiseli kwiiarhente zangaphandle zokuqokelela kunye neinzame zokuqokelela ityala ngeendlela zangaphakathi.
Ukungahlawulwa kunye nokuhlawulwa kade kunokuba nefuthe elibi kwimeko yokubolekwa kwababolekisi kunye nokuthoba amanqaku abo etyala, njengoko ababolekisi banokunika ingxelo ngobutyala kwii-bureaus zamatyala, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwi-Equifax, Transunion, nakwi-Professionalan. Kule meko iziphumo zokungahlawulwa kunye nokuhlawulwa kade kunokurekhodwa kwaye uhlale kwiingxelo zekhredithi zexesha elimiselweyo.
Imboleko-mali yakho mboleko mali ephakathi kunye nexabiso lenzala elibekiweyo elibuyiswa kwiintlawulo ezilinganayo zenyanga kwaye zihlala zikhawulelwe kwiinyanga ezingama-24. Ukubolekwa kwemali mboleko kunye nokufaneleka kuxhomekeke kwiprofayili yakho yetyala. Ababolekisi bethu banokukunceda ufumane imali engange-3,000 yeedola ngokuxhomekeka kumbolekisi, kwisimo sakho nakwimeko yakho yezemali.
Umnini kunye nomphathi we-itcashloans.com ayingobolekisi kwaye akabandakanyekanga ekwenzeni izigqibo zamatyala ezihambelana nokubolekisana okanye ukwenza imboleko mali. Endaweni yoko, iwebhusayithi yenzelwe kuphela inkonzo ehambelana, eyenza abasebenzisi banxibelelane nababolekisi kunye nomntu wesithathu. Iwebhusayithi ayibizi nayiphi na intlawulo ngenkonzo yayo, nokuba inyanzelise nawuphi na umsebenzisi ukuba aqale uqhakamshelwano naye nawuphi na umntu obabolekayo okanye umntu wesithathu okanye amkele nayiphi na imveliso mboleko okanye inkonzo enikezelwa ngababolekisi. Yonke idatha emalunga nemveliso mboleko yobuqu kunye nomzi mveliso ziboniswa kwiwebhusayithi ngenjongo yolwazi kuphela. i-tinycashloans.com ayikhuthazi nawuphi na umbolekisi othile, nokuba ayimeli okanye inoxanduva lwezenzo okanye ukungasebenzi kwababolekisi. i-tinycashloans.com ayiqokeleli, igcina okanye inokufikelela kulwazi malunga nemirhumo kunye neentlawulo ezinxulumene nababolekisi abanxibelelanayo kunye / okanye nayiphi na imveliso mboleko. Imali mboleko yobuqu kwi-Intanethi ayifumaneki kuwo onke amabakala. Ayingabo bonke ababolekisi kwinethiwekhi abanokuthi babonelele ngemali mboleko ukuya kuthi ga kwi-3,000, XNUMX yeedola. i-vidogocashloans.com ayinakuqinisekisa ukuba umsebenzisi wewebhusayithi uya kuvunywa nguye nawuphi na umntu obolekayo okanye ngayo nayiphi na imveliso mboleko, uya kuhambelana nombolekisi, okanye ukuba uthelekisiwe, uyakufumana isibonelelo semali-mboleko yobuqu ngokwemigaqo ecelwe kwi-intanethi. Ababolekisi kungafuneka benze itsheki yokuthenga ngetyala ngakwicala elinye okanye nangaphezulu, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kumaziko amakhulu etyala ukuze kuqinisekiswe ukuthembakala kwekhredithi kunye nomgangatho weemveliso zentengo zemboleko onokunikezela ngazo. Ababolekisi kwinethiwekhi banokufuna ukwenza uqinisekiso olongezelelekileyo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwinombolo yokhuseleko loluntu, inombolo yelayisensi yokuqhuba, incwadi yesazisi okanye amanye amaxwebhu okuchonga. Imigaqo kunye nobungakanani bemveliso mboleko ziyahlukahluka kubabolekisi kuya kubabolekisi kwaye zinokuxhomekeka kwizinto ezininzi, kubandakanya kodwa kungaphelelanga kwimeko yokuhlala kunye nokuma kwetyala komenzi-sicelo, kunye nemigaqo emiselwe ngumbolekisi ngamnye.
Amanqanaba kunye neentlawulo
© 2019 Imali mboleko yomhla wokuhlawulwa kwemali ephantsi | Sitsalele 1 (888) 539 0502